Home Wararka Maraykanka oo ka gaabsaday inuu taageero in Xildhibaanada Ceelwaaq ka qaybgalaan...
Maraykanka oo ka gaabsaday inuu taageero in Xildhibaanada Ceelwaaq ka qaybgalaan doorashada
Qoraal uu bartiisa Twiitter ka soo dhagay safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya danjire Larry ayuu ku booriyay in wadahadal lagu dhameeyo doorashada gudoonka Baarlamaanka.
Safiirka ayaa ka gaabsaday inuu taageero qorshaha la doonayo in Xildhibaanada Ceelwaaq lagu soo doortay laga qaybgaloyo doorashada Teendhada Afesyooni.
Hadalka safiirka ka soo yeeray ayaa u muuqda mid uu doonayo in uu uga fogaado xaalada cakiran ee ka jirta xarunta Afesyooni. Tilaabadan ayaa waxa ay dhiirigalin u tahay kooxda Garbahaarey.
Previous articleXaalad cakiran oo ka jirta Xalane iyo Xildhibaanada qaar oo ku xayiran albaabka hore
Next articleGuddoomiye Dhabancad oo baaq u diray xildhibaanada
“Heshiisyo ay si qarsoodi ah u galeyso” DF oo laga digay
16-xubnood oo muhiim u ahaa Burtinle oo iscasilay